विगत सम्झेर सन्नीका आँखामा आँसु | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
विगत सम्झेर सन्नीका आँखामा आँसु
प्रकाशित मिति २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:०० लेखक नेपाली जनता
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले आफ्ना बितेका दिनका केही काला अध्यायहरू सम्झिँदा अहिले पनि आँसु आउने बताएकी छन् । आफ्नो जीवनीमाथि बनेको ‘करनजीत कौर–द अनटोल्ड स्टोरी अफ सन्नी लियोनी’ को अन्तिम तयारीमा जुटिरहेकी उनले विगतलाई एउटा परिघटना सम्झेर बाँच्न चाहने बताएकी छन् ।
उक्त चलचित्रमा आफ्नो भूमिकाको स्मृति गर्दै उनले भनिन्, ‘जीवनका ती काला दिनहरू फेरि एकपटक याद गर्नु मेरा लागि सहज थिएन । म ती दिनलाई नराम्रो सपना मानेर छिट्टै बिर्सन चाहन्छु ।’ उनले जतिवेला आफ्नी आमाको निधन भयो त्यतिवेला मेरा पिता क्यान्सरसँग जुँधिरहेको समेत सम्झिन् । उनले भनिन्, ‘त्यसको केही समयपछि उहाँ पनि बित्नुभयो । मैले विवाह गरेँ अनि मलाई एउटा भारतीय टिभी सोमा आउने आमन्त्रण मिल्यो । यी सबै छिटोछिटो भए ।’
उनले आफ्नो विगत निकै दुखदायक भएको बताउँदै भनिन्, ‘जसलाई म यादै गर्न चाहन्न । सुटिङको वेला मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन, म रोएँ । म रोएको देखेर मेरा पति डेनियल वेबरसमेत डराए । उनी असाहय महशुस गरिरहेका थिए । किनकि, उनले मेरा जीवनका ती काला पानाहरू ठीक गर्न सक्दैनथे । आफ्ना परिवारलाई गुमाउनु एकदमै डरलाग्दो कुरा हो ।’
सन्नीको बायोपिक वेवसिरिज जी फाइभ ओटिटीमा आगामी शुक्रबार सार्वजनिक हुँदैछ । बलिउडमा चलचित्र ‘जिस्म २’ बाट डेब्यु गरेकी सन्नीले त्यसपछि ‘एक पहेंली लिला’, ‘रइस’, ‘वान नाइट स्ट्यान्ड’, रागिनी एमएमएस२’ ‘तेरा इन्तजार’ लगायतका दर्जनौँ चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन् । उनी मलयालम चलचित्रका सुपरस्टार माम्मुटीसँग छिट्टै चलचित्र ‘मधुरा राजा’ मा देखिँदैछिन् । त्यस्तै, उनी ‘रंगिला’ मा मुख्य भूमिकामा काम गर्ने टुंगो लागेको छ ।
अस्पतालबाट भागेका १६ वर्षीय अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं । अस्पतालबाट भागेका अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जले १६ वर्षीय किशोर पदम श्रेष्ठलाई बालाजु…
काठमाडौं । माघ ७ गते कमलादीको ल्यान्डमार्क होटलमा भएको भनिएको सामूहिक बलात्कार प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ…
किन छाडा भइरहेका छन् मन्त्रीहरु ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेको छ । सार्वजनिक पदमा…
रामकुमारी झाँक्रीमाथि साइबर क्राइम गरेकाे अाराेप !
काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष असारमा भएको स्थानीय तहको चुनावताका गुल्मीका शिक्षक बमबहादुर कुवँरलाई धम्की दिएको आरोप तत्कालिन एमाले नेत्री…